I-Internet Ministries - uSilbano Garcia, II.
Iintshumayelo nguSilbano Garcia, II.
USilbano Garcia, II. Ukhonza njengomvangeli kumabandla kaKristu, kwaye nguye umsekeli we-Internet Ministries. Ngomhla we-Meyi 1, i-1995 waba negalelo ekuhambiseni isango lokuqala le-Intanethi kwiicawa zikaKristu emhlabeni wonke owaziwayo ICawa--Christ.org. INkosi iye yamsebenzisa ekumiseni amabandla amahlanu, kwaye ubhaptize imiphefumlo ye-1,527 ibe ngumzimba kaYesu Kristu. NguThixo kuphela owaziyo inani lemiphefumlo efikile kuKristu ngokusebenzisa izifundo zethu ze-intanethi kunye nokufikelela kwi-Internet Ministries. UMzalwan 'uGarcia uye waziwa ngokuba ngumvangeli we-intanethi kunye noovulindlela kwintsimi ye-Intangelism. Uye waba negalelo ekuncediseni amakhulu amabandla ekusebenziseni i-Intanethi njengesithuthi sokusasazeka kweVangeli likaYesu Kristu.
UMzalwan 'uGarcia ungumKristu onomdla onamandla kwiintshumayelo zakhe kunye neentetho. Indlela yakhe enhle kwi-Evangelism yehlabathi iyasasazeka, kwaye uya kukhuthazwa ngulo mkhonzi kaKristu. UThixo wamsikelela uMzalwan 'uGarcia ngesipho sokuphumelela abantu emzimbeni kaYesu Kristu. Uye wahamba kwiindawo ezininzi zehlabathi ngomzamo wokukhuthaza iVangeli likaKristu kunye ne-World Evangelism phakathi kwecawa. UMzalwan 'uGarcia uyaqhubeka ekhonza njengomshumayeli onomdla kuphela ukwakha umzimba kaYesu Kristu iNkosi yethu noMsindisi.
Ukuba awukwazi ukubona amajelo angentla apha: khupha apha: MP3